Ogaden News Agency (ONA) – Warbixino dheeraad ah oon ka helnay dagaalkii lagu qaaday Barmiilka
Warbixino dheeraad ah oon ka helnay dagaalkii lagu qaaday Barmiilka
Posted by ONA Admin	/ September 20, 2012
Warar muhiim ah oon ka helnay gudaha Ogaadeeniya ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay dagaal aad u khadhaadhaa oo ka dhacay Magaalada Barmiilka, weerarkaasi oo lagu qaaday fadhiisin ay askarta gumaysigu ka daganaayeen magaaladaasi.
Waxay cutub katirsan NH/CWXO 8dii Bishan 9aad ee 2012 weerar ku qaadeen Magaalda Barmiilka fadhiisin ay Askarta gumaysigu ku lahaayeen halkaas. Wararar dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerarkaa oo ku saabsan khasaara dagaalkasi uu u gaystay cadawga oo ah bakhtiga ciidankiisa. Warkii ugu dambeeyay een ka helnay ilo-wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in askarta gumaysiga ee lagaga dilay goobta ay gaadhayaan in kabadan 55 Askari halka dhaawacuna uu ahaa 61kale.
Dhanka kale 16/09/2012 Deegaanka lagu magacaabo Tar-foodley oo katirsan magaalada godey dagaal ka dhacay ayaa waxaa askarta gumaysiga lagaga dilay 2askari waxaan lagaga dhaawacay 2kale. Sidoo kale dagaal ka dhacay deegaanka Dooxa- yarey oo Qobridahar karitsan ayaa waxaa lagu dhaawacay 2 askari oo kuwa gumaysiga ah.
Isla 16/09/2012 Dagaal isna ka dhacay meesha lagu magacaabo Cabdille-gadda oo katirsan Galaalshe aya waxaa askarta gumaysiga loogu gaystay khasaare lixaadle.